Wafti ka socda xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo Puntland yimid, booqdayna garoomada Galkacyo. – Radio Daljir
Wafti ka socda xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo Puntland yimid, booqdayna garoomada Galkacyo.
Galkacyo, Oct 29 – Waxaa maanta magaalada Galkacyo booqsho iyo kormeer hawleed uga bilawdeen wafti ballaraan oo ka socday guddiga xiriirka ciyaaraha Soomaaliya.
Waftigaan oo Galkacyo soo gaaray maalinimadii shalay ahayd ayaa saaka kormeer ku kala bixiyey garoomada kubadda cagta ee magaalada Galkacyo, gaar ahaanna garoonka cusub ee ay dhistay xarunta waxbarashada nabadda iyo hormarinta Galkacyo kaasi oo lagu magacaabo garoonka nabadda iyo dhallinta Galkacyo.
Mas’uuliyiintaan xiriirka ciyaaraha Soomaaliya oo uu horkacayey guddoomiye ku xigeenka xiriirka ciyaaraha Soomaaliya C/rashiid Xassan Xirsi ‘Baki’ ayaa waxaa kormeerkooda ku weheliyey mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka, waxaana garoonka nabadda ay kula kulmeen agaasimaha xarunta GECPD Marwo Xaawa Adam Camay oo xarunteedu ay hirgalisay dhismaha garoonka.
Madaxdaan ciyaaruhu waxay mid mid u galeen xafiisyada garoonka loo diyaariyey gaar ahaan hoolalka shirarka, guryaha martida, xafiisyada maamulka iyo gobo kale oo lagu talo galay in ay ku nastaan ciyaartoygu, waxaana sidoo kale ay socod lug ah ku dhex mareen xayndaabka weyn ee garoonku uu ku dhex jiro.
Gabagabadii kormeerkooda ayey ma’uuliyintii ciyaaraha iyo madaxdii garoonkaasi dhistayba waxay shir jaraa’id oo wada jir ah ku qabteen gudaha garoonkaasi cusub oo ah mid aan wali si rasmi ah loo furin.
Agaasimaha xarunta waxbarasha nabadda iyo hormarinta Galkacyo GECPD Marwo Xaawa Adam Camay oo shirkaasi jaraa’id hadal kooban ka jeedisay ayaa sharraxday ujeeddada ay u dhistay garoonka, waxaana ay ku tilmaatay in ay uga gollahayd xarunteedu dhismaha garoonkaan sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadda ciyaareed ee dhallinta iyo isdhexgalka bulshada deggan gobolka.
Marwo Xaawa waxay kaloo tilmaantay garoonku in uu yahay mid u dhaxeeya bulshada, cid kastana uu u furnaan doona xilliga la daahfuro, hase ahaatee waxay tilmaantay in ay maamul ahaan xarunteedu ay gacanta ku hayn doonto.
Guddoomiye ku xigeenka xiriirka ciyaaraha kubadda cagta Soomaaliya C/rashiid Xassan Xirsi ‘Baki’ oo isna shirkaasi jaraaid ka hadlay ayaa xarunta GECPD uga mahadceliyey dadaalka ay u gashay hormarinta bulashada gaar ahaanna dhismaha garoonka nabadda, waxaana uu carabku ku adkeeyey in ay ka qaybqaadan doonaan garoonka gaar ahaan xagga qalabka ciyaaraha iyo agabyada kale ee loo baahan yahay, kana dhimman ebyiddiisa.
Waftigaan uu hoggaaminayey ku xigeenka xiriirka ciyaaraha Soomaaliya waxaa uu ka kooban yihiin 5 xubnood oo xilal kala duwan ka haya xiriirka ciyaaraha, waxaana ujeeddada ay Puntland u yimaadeen ku qotantaa sidii ay ugu kuurgali lahaayeen ciyaaraha gobollada Soomaaliya ee dhawaan si rasmi ah uga bilaaban doona magaalada caasumadda ah ee Garoowe; waftigu waxaana sidoo kale ay kormeeri doonaan garoomada ciyaaraha ee gobollada kale ee Puntland.
C/ftaax Cumar Geeddi,